Midowga Afrika oo isu diyaarinaya in uu dhalleeceeyo maxkamaddaynta Kenyatta - Sabahionline.com
Midowga Afrika oo isu diyaarinaya in uu dhalleeceeyo maxkamaddaynta Kenyatta
Hoggaamiyayaasha Afrika ayaa isku diyaarinaya Isniinta (27-ka Maajo) in ay meel-mariyaan qaraar ku boorrinaya Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) in ay soo af-meerto dambiyada ka dhanka ah ee ay u haysato Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Madaxweyne Ku-xieen William Ruto, sidaana waxa sheegay AFP.
93 dhibbane oo la noqday taageeradii ay ICC-da ka siinayeen dacwadaha Kenyatta iyo Ruto
Bensouda oo diiday codsigii lagu doonaya in lagu tirtiro maxkamadeeynta ICC-da ee Kenyatta iyo Ruto
Hoggaamiyayaasha Afrika waxay ku baaqi doonaan "in la joojiyo qorshaha ICC... shuruucda Kenya waa in ay arrinkaa xal u helaan," ayuu yiri Guddoomiyaha Komishanka Midowga Afrika ee Nabadda iyo Ammaanka Ramtane Lamamra.
Haddii la gudbiyo, qaraarku wax saameeyn sharci ah kuma yeelan doono qorshaha ICC-du wax ku waddo, laakiin waxa suuragal ah in uu si weyn kor ugu qaado maqaamka Kenyatta ee qaaradda.
Tallaabada looga soo horjeedo ICC-da ayaa noqon doonta tii ugu horreeysay nooceeda ee ururka Afrika uu si rasmiya uga hor yimaado maxkamadda caalamiga ah, inkasta oo Kenyatta yahay hoggaamiyihii labaad ee Afrika ee ay maxkamadi haysato, kadib dacwooyinkii gumaadka ahaa ee ka dhanka ahaa Madaxweynaha Sudaan Cumar al-Bashiir.
Hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Amensty ayaa dhalleeceeysay tallaabada, iyada oo sheegtay "in ay ka walwalsan tahay isku dayada ay madaxda Kenya ku doonayaan in ay uga baxsadaan caddaaladda".
Danjiraha Kenya ee Qaramada Midoobay Macharia Kamau ayaa u sheegay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay in ICC-du joojiso dacwooyinka sababtoo ah waxa ay faraglin ku tahay hannaanka dimuqraadiyadeed ee Kenya, sida uu sheegay Daily Nation-ka Kenya.
Si kastaba ha ahaatee, Kamau uma muuqato waddo cad oo uu u maro joojinta dacwadda, maadaama Kenya ay saxiixe ka tahay Xeerkii Rome, kaasoo lagu dhisay laguna awood-galiyay ICC-da. "Sidaa darteed, Kenya waxa ay jeclaan lahayd in ay aragto in sida ugu dhakhsaha badan loo joojiyo dacwooyinka, sidee iyo ciddee waa arrin laga doodi karo, laakiin waa in ay joojiyaan," ayuu yiri Kamau.